China EVA foam foam durƙori na emeputa ihe na ndi n’enye ha | Baoerxi
Mgbanye ụfụfụ chọrọ
Ogige eji eji agba ubi
Ugbo ahihia eji agbaze ikuku nke EVA
IWU IWU NA-AKPANIGH NKWUKWU OMARA - Ejiri ergonomic 0,5 inch nke ịdị elu dị elu nke EVA foam iji mee ka ikpere gị wee kpuchido ihu ya pụọ ​​na ịchapu, pads ndị a siri ike maka ezigbo ọrụ mana ọfụma ọ ga-esiri gị ike ịma na ị bụ yi ha.
AKW FKW F FM WITHAKA NA-AK THER THER THE IMO - E mere ya ka ọ dabara n'ikpere gị iji eriri na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe. Mpempe ndị a na-anọ n'ọnọdụ dị mma na nchebe na-enweghị iwe iwekwa ụkwụ gị.
Mfe itinye ma wepu aka - Site na iji dozie eriri velcro, ị nwere ike dopu oghere ma ọ bụ gbanyụọ ngwa ngwa. Enweghị ogwe ma ọ bụ ihe siri ike ijikwa mmechi loop.
EGO maka INWE INWE IND IOROOR AND FUTEOOR - zuru oke maka ikpere mgbe ị na-ehicha ụlọ, ubi, eserese, yoga na ndị ọzọ. Akpụkpọ ọnụ, nke na-eguzogide ọgwụ mgbochi na-egbochi ịdafe na mbara ala dị larịị ma hichapụ ala gị.
EGO NA-EKWES, ỌZỌ, NA-EKWES SIRZ ZB ALLR ALL NKE ỌMA - Nke emere ma nwoke ma nwanyị, eriri velcro na-agbatị ọfụma ka ọ dabara ikpere ọ bụla.
Nke gara aga: Kachasị mma ji eme ubi
Osote: Worklọ ụlọ EVA Mat Gardening Mat Kneeler Knee Guard Pad Cushi
Ugbo ahihia na ahihia ahihia eji apoo ahiri mmiri
Kachasị mma ji eme ubi
Adreesị:Mpaghara mpaghara nke teknụzụ dị elu, Shijiazhuang Hebei, China
Tẹ:+86 311 8432 2728
Ekwentị mkpanaka:+86 13785209807, +86 15373877277
Ozi E-mail wonderlead@vip.163.com